Archives des Anosikely - Midi Madagasikara
Grenady tetsy Anosikely : Miantso ny fanjakana ny rain’i Kevin sy Andry
Redaction Midi Madagasikara 31 janvier 2014 Anosikely, Grenady, Miantso fanjakana, rain’i Kevin sy Andry
Vontom-pahoriana tokoa ny rain’izy roa lahy niresaka tamin’ny mpanao gazety. Araka ny efa nitaterana azy tamin’ny gazety dia namoy ny ainy ihany koa ny zokin’i Kevin antsoina hoe Andry. Samy nipoahan’ny grenady teny Anosikely izy roalahy ireo sy ny anabaviny iray tamin’ny sabotsy. Ilay zandriny moa maty teo no ho eo ary efa vita ny…
Efa misy olona valo nohenoina
Redaction Midi Madagasikara 31 janvier 2014 Anosikely, fanapoahana grenady
Loharanom-baovao akaiky ny mpanao fanadihadiana no nahafantarana omaly fa efa misy olona valo nohenoina tao anatin’izay andro vitsivitsy izay, momba ny fanapoahana grenady tetsy Anosikely. Etsy amin’ny tobin’ny zandary etsy Betongolo no mandeha ny fanadihadiana. Raha ny tsilian-tsofina re dia olona akaiky ny kandida iray ho filoham-pirenena ireo olona nohenoina ireo. Tsy voatery hoe tompon’andraikitra…